Nrụpụta ihe na ígwè ọrụ nke China | AHR.
A na-eji igwe eji eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ nchịkọta na obere ụlọ ọrụ mmanu mmanu na ụlọ ọrụ griiz na China. Usoro ngwaahịa a nwere ike ịmalite site na nnukwu ịgbà (180L) na ikike ọ bụla nke ọkara / obere ịwụ, obere akpa, ike, kalama na ihe ndi ozo nke akpachapu aka, njuputa. Usoro ihe omuma a nwere isi isi, isi abuo, na udiri ihe ndi ozo, nwere ike ichota ihe di iche iche nke ndi oru nile di iche iche.
Ọnụ ọgụgụ dị iche iche: 0.2-2L 2-18L 2 na-ejuputa ihe ziri ezi: ± 0.5%
12L / min (1 L gbọmgbọm ụdị gbawara)
4. Nsogbu ikuku: 0.4Mpa
5. Ike oriri: 0.6m3 / min
6 modeldị ike nke na-ebugharị moto: Y160L-8 / 7.5KW
7. Akụkụ; 2600 * 1800 * 2550 mm (isi abụọ)
Net arọ: 1200-1800 n'arọ
Igwe a bụ igwe mpempe akwụkwọ na igwe nkwakọ ngwaahịa, nke nwere akụkụ abụọ: ihe na-ebute ma jupụta. A na-ejikọta akụkụ abụọ dị ka dum site na ọkpọkọ.
Igwe a bụ isi ihe abụọ, enwere ike iji ya mee ihe maka calcium, isi griiz na mado na ihe ndị ọzọ na-ehicha mmiri.
Akụkụ ahụ nwere etiti, otu silinda, ikpo okwu na-ebuli elu na auger na-ebuli elu.
N'ihi na nke ogbenye fluidity nke griiz na ndị ọzọ na-mmiri mmiri ihe, ịghasa auger erute ngwaọrụ nakweere.
Mgbe ị na-arụ ọrụ, kpoo otu gbọmgbọm juputara na ihe 180 lita n'ime ikpo okwu na-ebuli elu. Abụọ cylinders ụgbọala na-arụ ọrụ table ịrị elu. N'otu oge ahụ, auger na-agbagharị iji bugharịa ihe n'ime gbọmgbọm ahụ kwụ ọtọ ma zipụ ha site n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'elu gaa n'akụkụ ndochi ahụ.
2 Na-ejuputa akụkụ:
Ihe mejupụtara akụkụ ahụ bụ etiti, isi ihe na-ejuputa ya na onye na-amalite ịmalite.
A na-ejikwa valvụ ụkwụ ma ọ bụ valvụ ejiri aka rụọ. Isi ihe na-ejuputa metering mejupụtara nke cylinder metering cylinder na rotary valve.
Akụkụ ala nke piston nke cylinder metering nwere ọkpụkpọ iji gbanwee nha olu, nke nwere ike idozi ego njuju dịka mkpa ya.
Olu nke dextral nke dial na-agbada ma olu aka ekpe na-abawanye.
Na mbido imeju, bọket ahụ (akpa) kwekọrịtara na ọdụ ụgbọ mmiri na-agbapụta, nke mere na ọ dị nso na ala nke ịwụ (akpa). N'oge imeju, ihe a ga-agbapụta ikuku na ịwụ (akpa) site na gburugburu nke oghere njuju site na ịlele usoro ahụ na ala. N'otu oge, ihe (akpa) ga-agbadata iji mejupụta ndochi.
3 Eletriki usoro na pneumatic arụ ọrụ ụkpụrụ:
The auger adiana nke a igwe na-anya site na a moto. Enwere ụlọ ọrụ eletriki eletrik na-arụ ọrụ na mgbatị ọkụ maka nchebe dị ukwuu nke moto ahụ.
A na-agbanye bọtịnụ ọkụ ọkụ n'ihu n'ihu nke igwe ndochi.
Na mgbakwunye na akụkụ ndị ọzọ dị n'elu bụ njikwa ikuku, ihe na-ebufe akụkụ nke ikuku nchịkwa ikuku n'ihu fuselage, a na-etinye akụkụ ndochi nke usoro ikuku ikuku na igwe ndochi.
Akụkụ nnyefe nke ihe nwere ike ịchọpụta ọrụ nke ibuli gbọmgbọm ahụ, ịkwụsị gbọmgbọm na ịhapụ gbọmgbọm ahụ.
Vegagharị na ndochi na-achịkwa iche iche, na mkpụrụedemede ukwu na ala (akpa) na-eji aka arụ ọrụ.
Igwe agbakọtara site na ọdụ gas ma ọ bụ ikuku ikuku na-abanye na igwe mgbe nyochachara.
Abịakọrọ ikuku abatakwa na cylinder na mgbagha mmewere site ịkpụ-apụ valvụ, cylinder separator, mgbali inye iwu valvụ, mmanụ alụlụ ngwaọrụ, reversing valvụ.
Usoro ọrụ ọkụ: akpa ịtọ (akpa) na-akwado njuju ndozi, valvụ ụkwụ amalitela, isi ihe na-amalite ịrụ ọrụ, bọket ahụ (akpa) na-adaba n'usoro, njucha ahụ agwụla, bọket (akpa) dabara na ọnọdụ, a na-atụle nha ahụ n'ọnọdụ mbụ ya wee kuru ya.
Jiri aka wepụ bọket ahụ (akpa) wee tinye bọket ahụ n'elu (akpa) wee malite valvụ ụkwụ maka usoro ọrụ na-esote.
Nke gara aga: 8 Afọ ekspootu Hammer mmanu mmanu - Petroking Ep2 Ep3 Lithium Griiz 17kg Pail - PETROKING
Osote: Petroking Yellow Griiz Multipurpose Lithium Griiz 1kg obere akpa
Griiz na-ejuputa igwe
Griiz maka igwe